कुलमानको १ वर्ष - सक्षम नेतृत्वका कारण प्राधिकरण सफलतातर्फ - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ २९, काठमाडौँ । नेतृत्व बदलिँदा सरकारी संस्थान कसरी सफलताको दिशामा जाँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ।
सरकारले गत वर्ष आजैका दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्यो । उनी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुअगाडि प्राधिकरणले हिउँदमा ७ घण्टा दैनिक विद्युत्भार कटौती हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर घिसिङले भने, “म प्राधिकरणको नेतृत्व संहाल्न आउँदा जताततै समस्या नै समस्या थियो । तर आज एउटा नयाँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको छ । नागरिकमा एउटा नयाँ विश्वास पैदा भएको छ ।”
उनले आव २०७२/७३ मा रु. ३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख सञ्चालन नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण रु. २ अर्ब ४० करोड ७३ लाख सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी दिए । आव २०७२/७३ मा रु. ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३/७४ मा रु. ९७ करोड ८९ लाखमा सीमित भएको छ ।
प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमै आव २०७३/७४ को घाटा करिब रु. ७ अर्ब ५० करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि खुद वार्षिक घाटा अझै कम हुने अनुमान गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७/१७ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लगानी रहने गरी ‘एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरी क्रियाशील बनाइएको समेत कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन जनताको समेत लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको द्रुत गतिमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजना निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणले विशेष पहल गर्ने तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उचित समिश्रणलाई हुने गरी उत्पादन समिश्रण कायम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्वः उत्पादन वृद्धि, विद्युत् चुहावट घटाउँदै विद्युत्को बिक्री परिमाण बढाउनेलगायत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने । आगामी वर्ष पनि विद्युत् चुहावट करिब ३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आवमा ३ प्रतिशत नै चुहावट घटाउन सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आगामी १० वर्षभित्र करिब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी मुलुकका प्रमुख शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । विद्युत् चुहावट घटाउन, सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अनलाइन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अवलम्बन गरी ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने पनि प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ ।
« भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनमा पढाउनुपर्ने बाध्यता (Previous News)
(Next News) नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा चालकको लापरबाहीले सवारी जाम बढी »